Taliyaha Cusub ee Booliska Soomaaliya oo Xilka La Wareegey – Radio Daljir
Abriil 10, 2017 5:29 g 0
Taliyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay Ciidanka Booliska Soomaliyeed Gen. Cabdixakiin Daahir Saciid (Saacid) ayaa maanta xilka kala wareegay taliyihii hore ee ciidamada booliska Soomaaliyeed sareeyo gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud.
Munaasabada xil-wareejinta ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka Amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) iyo Saraakiil ka tirsan ciidanka Booliska.
Taliyihii hore Jan. Xaamud ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu soo qabsoomay, isagoo u mahad celiyay Ciidamada Booliska iyo Saraakiisha sida wanaagsan ee ay ula soo shaqeeyeen.
Taliyaha cusub ee Ciidamada Booliska Gen. Cabdixakiin Saacid oo horay xilkan u soo qabtay ayaa balan qaaday inuu halkeeda ka sii wadi doono horumarinta ciidamada booliska iyo sidii amniga loo sugi lahaa.
Wasiirka Amniga gudaha Maxamed Abukar Islow (Ducaale) ayaa ku booriyay taliyaha cusub inuu la yimaado wax qabad dhab ah isla markaana uu ka soo dhalaalo howsha culus ee laga sugayo oo ah sugidda amniga dalka, isagoo u mahad celiyey taliyihi hore.
Warkii Fiidnimo ee Radio Daljir iyo Xasan Haykal